शिक्षा | Seto Patrika
फुर्सदमा रहेका कक्षा १ देखि १० सम्मका विद्यार्थीले पढ्न मिल्ने गरी शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले लर्निङ पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ । कक्षा १ देखि १० सम्मकाविद्यार्थीले विद्यालयमा पढ्ने सामग्रीलाई यो पोर्टलमा समावेश गरिएको छ । सबै विषयको सामग्री यसमा समेटिएको छ । यसको सञ्चालन तथा नियन्त्रण शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गर्नेछ । केन्द्रका महानिर्देशक डा. तुल्सी थपलियाका अनुसार विद्यार्थीले यो पोर्टलमा गएर आफूलाई आवश्यक कक्षा र उक्त कक्षाका विषय अनुसारको सामग्री पढ्न पाउनेछन् । तर त्यस्त विद्यार्थीमा इन्टरनेटको पहुँच हुनुपर्छ । एक पटक इन्टरनेट खोलेर आफूलाई मन परेको सामग्री डाउनलोड गरेर फुर्सदमा पढ्न मिल्ने पनि केन्द्रले जनाएको छ । कोभिड १९ को संक्रमण त्रासका कारण पढाईबाट बञ्चित भएका विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर यो पोर्टल सुरु गरिएको हो । फुर्सदमा रहेका विद्यार...
काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गस्थित रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पस (आरआर)ले अनलाइन कक्षा सुरु गरेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनले क्याम्पसमै पुगेर पढ्ने÷पढाउने काम रोकिएपछि अनलाइन कक्षा सुरु गरिएको हो । आरआर क्याम्पस विद्यार्थी कल्याण शाखा प्रमुख देवी घिमिरेका अनुसार स्नातकोत्तर (एमए) र स्नातकको (बीसीए)को भिडियो कक्षा चलिरहेको छ । स्वअध्ययनका सिलसिलामा विद्यार्थीलाई कुनै खालको समस्या नपरोस् भनेर हामीले उपलब्ध स्रोत साधनको उपयोग गरेर जति सकिन्छ, त्यति सुरु गरौं भनेर काम गरिरहेका छौं,’ घिमिरेले भने, ‘कोर्स नै अगाडि बढाउने भन्दा पनि पढाइ भइसकेका विषय रिभिजन (पुनः दोहोर्याउने) र पढ्न बाँकी विषयवस्तुमा विद्यार्थीले पूर्व तयारी गर्न सकुन् भन्ने उदेश्य हाम्रो हो ।’ ...
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण अरूजस्तै शैक्षिक क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को परीक्षा हुन सकेको छैन भने एक कक्षा १ देखि ९ सम्म वार्षिक परीक्षा भएपनि नतिजा (रिजल्ट) सार्वजनिक गर्न सकिएको छैन । यससँगै नयाँ शैक्षिक सत्र पनि ढिलो मात्र सुरु हुने पक्का भएको छ । साथै, कारोनाको त्रास कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने यकिन नभएकाले वैकल्पिक उपायबारे अध्ययन थालिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘कोरोनाको त्रास कहिलेसम्म रहन्छ, कसैलाई पनि थाहा छैन । भारतमा कोरोना अन्त्य नभएसम्म हामी सधँै त्रसित हुनुपर्ने भएकाले शिक्षामा वैकल्पिक व्यवस्था गर्न लागेका छौँ ।’ लकडाउन खुलेको एक सातामा रिजल्ट मन्त्रालयकाअनुसार कक्षा १ देखि ९ सम्मको परीक्षाको नतिजा लकडाउन खुलेको एक हप्ताभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । यसबारे शिक्षामन...
कोभिड-१९ को महामारीबाट जोगिन घरमै बस्नुपरेको यो बेला किताब पढ्ने उपयुक्त समय हुनसक्छ। यहाँ दिइएका लिंकबाट इन्टरनेटमै सजिलै किताब पाइनेछ। काठमाडौं। घरमै हुनुहुन्छ नि ? ननिस्कनुहोस् है। कोभिड-१९ महामारी फैलिन नदिन सरकारले घोषणा गरेको ‘लकडाउन’ (बन्दाबन्दी) हाम्रै निम्ति हो। तपाईं एकजनामात्रै बाहिर निस्कँदा पनि ठूलो गल्ती हुनसक्छ। किनभने वैज्ञानिकहरूले भनेका छन्, आवागमन र भेटघाटलाई यथावत राख्ने हो भने कुनै एकजना व्यक्तिमा भएको कोरोना भाइरस थप ३५०० जनामा फैलिनसक्छ। सोच्नोस् त, यदि तपाईंको शरीरमा कोरोना भाइरस छन् भने तपाईं अरू ३५०० को जोखिमको कारक बन्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं संक्रमित हुनुहन्न भने पनि बाहिरफेर निस्कनुहुन्छ भने जोखिमका ३५०० मध्ये एक बन्नुहुनेछ। कथंकदाचित तपाईंलाई संक्रमण भइहाल्यो भने तपाईं फेरी थप ३५००को रोगको कारक बन्न सक्नुहुन्छ। यो ३५०० भित्र अपरिचितभन्दा बढी तपाईंकै पर...
चितवनमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दै विद्यालय
लकडाउनको समयमा विद्यार्थी घरमा पढ्न नमानेको गुनासो आउन थालेपछि चितवनका विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका हुन्। चितवन। लकडाउनको समयमा विद्यार्थीहरू घरमा नपढेपछि चितवनमा रहेका विद्यालयले विद्यार्थीलाई केन्द्रित गर्दै अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका छन्। शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ चितवनका प्रमुख भूमिलाल सुवेदीका अनुसार जिल्लामा एसईई परीक्षा दिने तयारीमा २२४ विद्यालयका ११ हजार २५४ विद्यार्थी छन् । विद्यार्थी र शिक्षकको समय मिलाएर हरेक दिन कुनै एक समयमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन भइरहेको उनले जानकारी दिए। एक दिन एउटा विषयको पढाइ हुने गरेको सुवेदीकाे भनाइ छ। “लकडाउनको समयमा विद्यार्थी घरमा पढ्न नमानेको गुनासो आउन थालेपछि विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका हुन्”, अनलाइन कक्षा सञ्चालनका लागि एपमार्फत् विद्यार्थीलाई जोडेर पढाइने गरिएको छ। अझै पनि केही विद्यार्थी सो एपभन्दा बाहिर...
लकडाउनमा थुनिएको बेला यसरी लिन सकिन्छ विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयका निःशुल्क अनलाइन कोर्ष
विश्वव्यापी महामारी बनेको कोभिड-१९ लाई थप फैलिन नदिनका लागि घरभित्रै थुनिन परेको यो समयलाई आफ्नो रूचि अनुसारका कोर्ष अनलाइनमा निःशुल्क पढेर उपयोग गर्न सकिन्छ। काठमाडौं। आज लकडाउनको चौथो दिन। कोभिड-१९ को विस्तार रोक्नका लागि सरकारले ११ चैतदेखि लागू हुने गरी एक साताका लागि लकडाउनको आदेश जारी गरेको छ। यो आदेश अरू लम्बिन सक्ने उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले बताइसकेका छन्। यसको अर्थ घर बसाइँ अझ लम्बिन सक्छ। कोभिड-१९ को विस्तार रोक्नका लागि यो नै अहिलेसम्मको सबैभन्दा उपयुक्त विधि देखिएको छ। कसैको सम्पर्कमा नगएपछि अरूबाट संक्रमण सर्ने सम्भावना भएन। आफू संक्रमित भइसकिएको रहेछ भने त्यो अरू धेरै व्यक्तिमा फैलिने सम्भावना पनि कम भयो। विशेषज्ञहरूले एकजना व्यक्तिमा भएको कोरोना भाइरस थप तीन हजार ५०० जनासम्ममा फैलिन सक्ने हिसाब निकालेका छन्। त्यसैले घरभित्र बस्नु नै कोभिड-१९ को फैलावट...
वैशाख र जेठका लागि तय त्रिविका सबै परीक्षा स्थगित
त्रिविले कोभिड-१९ को कारणले यसअघि चैतमा हुने परीक्षा पनि स्थगित गरेको थियो। काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समितिले आउँदो वैशाख र जेठ महीनामा सञ्चालन हुने परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। २७ चैतमा भएको समितिको बैठकले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को कारणले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुद्वारा वार्षिक परीक्षा प्रणाली र सेमेष्टर प्रणाली परीक्षा अर्को सूचना प्रकाशित नगरेसम्म स्थगित गर्ने निर्णय गरेको समितिका सदस्य सचिव तथा परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले जानकारी दिए। त्रिविले कोभिड-१९ को कारणले यसअघि चैतमा हुने परीक्षा स्थगित गरेको थियो। वैशाख र जेठमा सञ्चालन गरिने परीक्षामा विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान, व्यवस्थापन सङ्काय र शिक्षा शास्त्र सङ्कायतर्फका चार वर्षे क्रमशः बीएस्सी, बीबीएस र बीएड चौथो ...
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण अन्तिम समयमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) स्थगित भएपछि झण्डै पाँच लाख विद्यार्थी अन्योलमा छन् । परीक्षा स्थगित भएको एक महिना पुगिसक्यो । तर, न लकडाउन खुल्ने संकेत देखिन्छ, न तत्काल परीक्षा गर्ने अवस्था छ । पछिल्लोपटक सरकारले गरेको निर्णयअनुसार वैशाख १५ सम्म लकडाउन कायम रहनेछ । त्यसपछि पनि लकडाउन खुल्ने/नखुल्ने यसै भन्न सकिन्न । यसले परीक्षाको तयारीमा रहेका विद्यार्थी र अभिभावकमा एसईई परीक्षा के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ । सरकारको अहिलेसम्मको तयारी हेर्दा ढिलो चाँडो परीक्षा गर्ने नै देखिन्छ । परीक्षा गर्नुको विकल्प पनि छैन । परीक्षा कहिले र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा राय दिन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा. डा. चन्द्रमणि पौडेलको नेतृत्वमा कार्यदल नै बनाइएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको अहिलेसम्मको तयारी भ...